Ny valanaretin'ny coronavirus eto Madagasikara - Wikipedia
Ny valanaretin'ny coronavirus eto Madagasikara
Tamin'ny 20 Marsa vao fantatra amin'ny fomba ofisialy ny fisian'ny valanaretin'ny coronavirus eto Madagasikara, araka ny fanambaràna nataon'ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina. Vehivavy telo avy any Frantsa no hita fa mararin'io aretina io rehefa nidina avy tamin'ny fiaramanidina nitondra azy ireo ka notsapaina hafanana. Raikitra avy hatrany ny fandraisana fepetra toy ny fanajanonana ny sidina rehetra avy any ivelany, indrindra fa avy amin'ireo firenena eoropeana, ny fanentanana ny vahoaka hihiboka ao ao amin'ny toeram-ponenany avy, ny fijerena ny mari-panan'ireo olona anaty fiara mbola niala na niditra ny tanan-dehibe toa ny renivohitr'i Madagasikara, ny fampiatoana ny fitateram-bahoaka, ny fanakatonana ny toeram-piasana mety hahitana olona maro ary ny fanakatonana ny sekoly sy ny toeram-pivavahana.
Misy fiantraikany ara-tsosialy ny fahatafidiran'io valanaretina io eto Madagasikara sy ireo fepetra tsy maintsy noraisin'ny fanjakana, ka isan'izany ny fisondrotry ny vidin'entana sasany, ny fahasahiran'ireo mpitrongy vao homana, ny fahaverezan'asan'ny olona maro, ny fijalian'ireo olona avy na mandalo ao Antananarivo na Toamasina ka mikasa hody any amin'ny faritra hafa, na ireo mikasa hody ao Antananarivo na ao Toamasina avy any amin'ny faritra hafa.
Ny Institut Pasteur eto Madagasikara no misahana ny fitiliana ny aretina, ka ny hôpitaly manara-penitra eny Andohatapenaka no misahana ny fanaraha-maso ny fivoaran'ny aretin'ireo olona tazomina ao.
Arakaraka ny fisehon'ny olana no itadiavan'ny fitondram-panjakana paikady hamahana ny olana misy eo amin'ny fiarahamonina, isan'izany ny famelomana ny Tsena Mora sy ny fizarana sakafo maimaimpoana ho an'ny sokajin'olona heverina fa marefo. Nanampy ny firenena malagasy ara-tsosialy koa ny firenena sasany.
1 Ireo andro vitsy talohan'ny fidiran'ny valanaretina
1.1 Fifamoivoizana mampifandray amin'ny any ivelany
1.2 Ny hevitr'ireo mpanao politika
1.3 Fanakatona amin'ny ampahany ny sisintany
2 Fidiran'ilay valanaretina eto Madagasikara
2.2 Fepetra noraisin'ny fanjakana
2.2.1 Fepetra manokana hoan'ny faritra Analamanga sy Toamasina
2.3 Ny fivoaran'ny valanaretina
2.3.1 Mandritra ny volana Marsa 2020
2.3.2 Mandritra ny volana Avrily 2020
3 Ny ady atao amin'ny coronavirus eto Madagasikara
3.1 Fisehon'ny ady
3.2 Ny olana momba ny ady atao amin'ny coronavirus
4 Ny tranga ara-tsosialy ateraky ny fepetra momba ny coronavirus
4.1 Ireo olana mitranga
4.1.1 Fahasahiranan'ireo tsy manan-kialofana
4.1.2 Tsy fisian'ny fiara mpitatitra olona
4.1.3 Fiakaran'ny vidin-javatra
4.1.4 Olana eny amin'ny orinasa tsy miankina
4.2 Ireo vahaolana
4.2.1 Ireo vahaolana aroson'ny fitondram-panjakana
5 Ireo zavatra heverin'ny olon-tsotra fa mety hiarovana amin'ny coronavirus
5.2 Fanafody vazaha
5.3 Zavatra hafa
6 Fanampiana avy any ivelany
6.1 Fanampiana avy amin'ny OMS
6.2 Fanampiana avy amin'ny firenena hafa
Ireo andro vitsy talohan'ny fidiran'ny valanaretinaHanova
Fifamoivoizana mampifandray amin'ny any ivelanyHanova
Ny fizahan-tany sy fitaterana an'habakabaka sy an-dranomasina mampitohy an'i Madagasikara amin'ny any ivelany dia mbola nalalaka nandritra ny fotoana efa nahafantaran'ny maro fa tsy mitsaha-mimitombo ny isan'ny firenena idiran'ilay valanaretina coronavirus.
Nivezivezy tsy niato ny fiaramanidina mitondra vahiny sy Malagasy mankaty Madagasikara sy mankany ivelany. Maro ny Malagasy tsotra nitaky sy niangavy ny fanakatonan'ny fanjakana ny sisin-tanin'i Madagasikara, ka any amin'ny tambajotran-tserasera no nahitana izany fitakiana izany betsaka. Maro ireo Malagasy niangavy ny fanjakana malagasy mba hakatona ny sisin-tanin'i Madagasikara, ka any amin'ny tambajotran-tserasera no nahitana izany fitakiana izany betsaka. Raha maro ny Malagasy natahotra ny hidiran'izany aretina izany eto Madagasikara dia misy koa ireo nihevitra fa tahotra tsy marim-pototra loatra izany fa miforona noho ny vaovao tsy marina misy mampiely.
Ny hevitr'ireo mpanao politikaHanova
Nilaza ny tokony hanidiana ny sisintany ny ny filohan'ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) sady filoha-pirenena teo aloha Marc Ravaloanana tamin'ny 11 Marsa 2020 araka izao teniny izao: "Ny mpitondra no tomponandraikitra voalohany amin'ny fiarovana ny vahoaka, koa manaitra sy manao antso avo aminareo aho amin'ny maha raiamandreny ahy eto amin'ny firenena ny mba handraisana fepetra hentitra sy haingana ny tokony hanidiana ny sisitanin'i Madagasikara, indrindra ho an'ireo sidina avy amin'ireo firenena efa voakasiki'ity valanaretina coronavirus ity. Marefo ny firenentsika manoloana izany zava-doza izany ka tsy maintsy hentitra ny fepetra tokony ho raisina."
Nanontany ny hevitry ny Governemanta ny SolombavambahoakaHanova
Noho izany rehetra izany dia nampiantso ireo minisitra misahana ny fahasalamam-bahoaka, ny fizahan-tany, ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro ny Solombavambahoaka tamin'ny 12 Marsa 2020 tao Tsimbazaza mba hahazo fanazavana momba ny fomba hiarovana an'i Madagasikara tsy hidiran'ilay valanaretina. Nanome toky ireo minisitra ireo fa voafehy tsara ilay aretina satria mbola tsy misy olona heno fa marariny hatramin'io andro io. Ny solombavam-bahoaka avy amin'ny mpanohitra (indrindra ny avy ao amin'ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) no lohalaharana tamin'izany. Nanamafy hatrany ny fanapahan-keviny ny tsy hanidy ny sisin-tany anefa ny governemanta malagasy sady nanome toky fa hahavoafehy an'ilay valanaretina noho ny fahavononan'ny ho enti-manana amin'izany sy ny fanohanan'ny mpaiara-miombona antoka.
Fanakatona amin'ny ampahany ny sisintanyHanova
Nanao kabary momba ny fiarovana an'i Madagasikara tsy hidiran'ny coronavirus ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny 14 Marsa 2020, ka san'ny voalazany ny fampiatoana ny sidina rehetra avy any ivelany (Italia, Espaina, Frantsa, Alemaina sy ny sisa) manomboka amin'ny 15 Marsa 2020 mandritra ny telopolo andro, nefa avela hiditra ny fiaramanidina mitondra Malagasy sy vahiny monina eto Madagasikara avy any ivelany mandra-pahatongan'ny 19 Marsa 2020, voaresaka koa ny tsy andraisana intsony ireo sambo mpitondra olona nanomboka tamin'ny 14 Marsa 2020.
Tamin'ny volana Marsa 2020 ny OMS tamin'ny alalan-dramatoa Charlotte Faty Ndiaye, izay solonteny eto Madagasikara, dia nampita ny hafatry ny OMS fa tsotra ny fiadiana amin'ny coronavirus, dia ny tsy fitangoronan'ny olona, ary ny tsy fahampian'ny fampahalalam-baovao sy fanentanana no tena olana. Nilaza koa izy fa voaomana ny fiatrehana ny coronavirus eto Madagasikara, ay nanome vola mitentina 3 700 000 dôlara (avy amin'ny Banky iraisam-pirenena) hiatrehana ny coronavirus ny OMS, ka isan'ny nampatoky ny fitondram-panjakana izany . Nanampy koa izy fa ny mety ho vokatra ara-tsosialy sy ara-toekaren'ny fanakatonana sisin-tany no ratsy kokoa. Noho izany, araka ny hafatry ny OMS dia tsy tokony hakatona tanteraka ny seranam-piaramanidina eto Madagasikara mba tsy hampikatso ny toekarena izay hita fa mihamandroso. Izany no mbola naharesy lahatra ny fitondram-panjana namela ny fitaterana an'habakabaka mampitohy an'i Madagasikara amin'ny firenena vitsy toa an'i Frantsa.
Hatramin'ny 14 Marsa ny fitondram-panjakana dia nanao izay hampitony ny tahotry ny vahoaka fa mbola tsy tonga eto Madagasikara ny coronavirus ary manao izay ho afany hiarovana ny ain'ny Malagasy ny mpitondra amin'ny alalan'ny fandraisana fepetra isan-karazany mifandraika amin'izany miampy ny fanohanan'ireo mpiara-miombona antoka amin'i Madagasikara.
Fidiran'ilay valanaretina eto MadagasikaraHanova
Ny fitaterana an'habakabaka no fitaovana nampiditra ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara.
Sarintany maneho ny fielezan'ny aretina vokatry ny coronavirus maneran-tany tamin'ny 21 Marsa 2020. Tamin'ny 20 Marsa 2020 no nambara amin'ny fomba ofisialy ny fisian'ny olona tratran'ilay valanaretina eto Madagasikara.
Ireo olona tratra voalohanyHanova
Fiaramanidin'ny Air France
Vehivavy teo avy any Frantsa no nolazaina tamin'ny fomba ofisialy fa voan'ilay valanaretina vokatry ny coronavirus eto Madagasikara, araka ny fanambaràn nataon'ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina tamin'ny 20 Marsa 2020. Tsy niara-tonga ireo vehivavy ireo fa ny iray (41 taona) dia efa tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'ny 17 Marsa 2020 niaraka tamin'ny fiaramanidina Air France 934, ny iray hafa (19 taona) tonga tao tamin'ny 18 Marsa rehefa avy nandalo tao Maorisy sady niaraka tamin'ny fiaramanidina maorisiana Air Mauritius MK 288, ary ny fahatelo kosa (45 taona) tonga teto tamin'ny 19 Marsa 2020 niaraka tamin'ny fiaramanidina Air Mad MD 051 .
Nisy olona sivy hafa indray no fantatra tamin'ny 23 Marsa 2020 fa voan'ny coronavirus, araka ny fanambaràna ofisialy nataon'ny filoham-pirenena, ka nampitombo roa ambin'ny folo ny isan'ny olona tratran'ilay valanaretina valanaretina eto Madagasikara izany.. Ny sidina Air France AF934 no nitondra azy ireo: vehivavy malagasy efatra (43, 54, 58 ary 61 taona), lehilahy malagasy roa (44 sy 60 taona), lehilahy frantsay iray monina eto Madagasikara (60 taona), lehilahy gineana iray monina eto Madagasikara (55 taona), lehilahy hafa iray koa (58 taona). Nandritra ny fotoana namelana ireo fiaramanidina samihafa amin'ny sidina avy any Frantsa ireo no nahatafiditra ireo olona ireo fa tsy indray mandeha.
Raha toa ka natoka-monina mandritra ny dimy ambin'ny folo andro ny ankamaroan'ireo mpandeha tamin'ny sidina avy any ampita dia tsy vitsy koa ireo nozahana mari-pana dia nalefa nody ka atahorana hampiely ilay aretina satria tsy fantatra na mitondra ilay tsimokaretina izy ireo na tsia na dia ambany aza ny maripanany tamin'ny andro nahatongavany.
Na dia nolazaina fa naato tanteraka ny sidina mampitohy an'i Madagasikara amin'ny any ivelany dia mbola nisy ihany ny sidina Air France nahazo alalana manokana tamin'ny fitondram-panjakana malagasy nandritra ny andro vitsy taorian'izany fanakatonana tanteraka izany.
Fepetra noraisin'ny fanjakanaHanova
Fepetra manokana hoan'ny faritra Analamanga sy ToamasinaHanova
Manoloana ny fitomboan'ny isan'ny olona tratran'ilay valanaretina dia nanandray fepetra ny fitondram-panjakana malagasy ka nametraka ny tsy fahafaha-mivezivezin'ny mponina sy ny tokony hisian'ny fitokana-monina faobe (tsy mivoaboaka ny toeram-ponenana, olona iray isan-rtokatrano ihany no afaka mivoaka raha tsy maintsy hanao izany) mandritrany dimy ambin'ny folo andro, ho an'ny mponina ao amin'ny faritra Analamanga sy ny tanànan'Antananariivo sy Toamasina. Natsangana tao amin'ny Mining Business Center ao Ivato ny Centre opérationnel COVID-19 izay natokana hanara-maso ny marary sy ireo natoka-monina. tsy azo atao ny mivezivezy amin'ny alilna manomboka amin'y 8 ora alina ka hatramin'ny 5 ora maraina.
Tsy maintsy mijanona ao amin'ny toeram-ponenany avy ny mponina ao Toamasina sy Antananarivo, mijanona ny fitateram-bahoaka (taksibrosy, taksibe, taksy) ao amin'ireo tanàna roa ireo, afa-tsy ireo fiarakodia mitondra enatam-barotra sy ny fiarakoadia an'ny tena manokana.
Misokatra ihany manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'y 12 ora antoandro ny toeram-pivarotana ahitana ireo zavatra ilain'ny mponina andavanandro (vary, voamaina, solika, siramamy, sns), ka isan'izany ny mpamongady, ny mpaninjara ary ny tsenam-pokontany. Napetraka ny sakana hanaovana fizaham-pahasalamana amin'ireo lalana mivoaka miditra an'Antananarivo sy amin'ny tanàn-dehibe hafa, izay izahana ny hafananan'ireo olona afaka mandeha mivoaka ny tanan-dehibe rehetra hisorohana ny fihanahan'ilay valanaretina tsy hiparitaka amin'ny faritra hafa.
Notadiavina indray ireo Malagasy avy any ivelany tafiditra eto Madagasikara hatramin'ny 14 Marsa 2020, izay navela nody tamin'ny mbola tsy nahitana olona mararin'ny coronavirus. Mikatona ny sampandraharaham-panjakana rehetra afa-tsy ireo mikarakara ny fahasalamana sy ny fitsarana ary ny filaminam-bahoaka. Mikatona ny toeram-piasana hafa rehetra afa-tsy ireo misahana ny angovo, ny solika, ny fahadiovan'ny tanàna, ny misahana asa fampahalalam-baovao ary ny banky. Navela ihany ny fisokafan'ny orinasa tsy miankina raha toa ka hahafehy tsara ny fepetra momba ny ady atao amin'ny cornavirus ny mpampiasa (elanelana iray metatra, famerana ny isan'ny mpiasa isan'andro, sns).
Natsahatra, eran'i Madagasikara, ny fikarakarana mety hahavory olona maro (fifaninanana fanatanjahan-tena, lanonana, fivoriana, sns). Nikatona koa ny toeram-pianarana rehetra eran'ny Nosy mandritra ny dimy ambin'ny folo andro aloha. Taorian'ny fiaraha-midinika tamin'ny filoham-pirenena dia nanapa-kevitra ny tao amin'ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM) ny hanakatona ny toeram-pivavahana, ka nanomboka tamin'ny Alahady 21 Marsa 2020 dia maro ny fiangonana nampihatra izany.
Ny fivoaran'ny valanaretinaHanova
Mandritra ny volana Marsa 2020Hanova
20 Marsa: olona telo mararin'ny coronavirus, io no isa voalohany.
22 Marsa: miampy sivy ny marary, ka lasa roa ambin'ny folo ny fitambarany amin'ny teo aloha (+ 300%).
23 Marsa: miampy dimy ny marary, ka lasa fito ambin'ny folo ny fitambarany amin'ny teo aloha (+ 41,7%).
24 Marsa: miampy roa ny marary ka lasa sivy ambin'ny folo ny fitambarany amin'ny teo aloha (+ 11,8%).
26 Marsa: miampy dimy ka lasa efatra amby roapolo ny fitambarany amin'ny teo aloha (+ 26%).
27 Marsa: miampy telo ka lasa enina amby roapolo ny fitambarany amin'ny teo aloha (+ 8.3%).
Tsy nisy ny aina nafoy araka ny tatitra ofisialin'ny fitondram-panjakana.
Mandritra ny volana Avrily 2020Hanova
Taorian'ny fanapahan-kevitry ny fanjakana hanakatona ny sisintany dia mbola nisy ny Sinoa miisa 38 tonga teto Madagasikara tamin'ny 19 Martsa 2020, dia ireo hanamboatra ny kianjan'i Mahamasina (na Kianja Barea), ka nampametra-panontaniana sy nampatahotra ny olona sasany izany, noho ilay aretina avy any Sina, nefa ny fitondram-panjakana dia nanamafy fa tsy misy atahorana ny amin'izy ireo. Voalaza fa natoka-monina nandritra ny 15 andro tao Addis-Abeba mialoha ny nahatongavany eto Madagasikara izy ireo ary tsy avy any Sina avokoa fa misy avy ao Afrika. Noho ny resa-be naterak'izany fahatongavan'ny Sinoa eto Madagasikara izany dia tapa-kevitra ny hamerina azy ireo any amin'ny toerana niaviany ny fitondram-panjakana.
Tsy azon'ny olona koa ny fanapahan-kevitry ny fanjakana momba ny famelana ny mpiasan'ny orinasa tsy miankina hanohy hiasa nefa tsy avela hiasa ny mpitatitra olona. Tsy ireo te hamonjy ny faritra niaviany na ireo te hanohy ny asa madinika fivelomany andavanandro ihany no mimenomenona momba izany, fa ao koa ireo mitrongy vao homana, na ireo mitady anio ny hohanina rahampitso.
Voatsikera ny toa fitanilana tanaon'ny fitondrana malagasy raha nanome fotoana ampy hampodiana ny Malagasy avy any ampitan-dranomasina sy namela azy ireo hitaingina fiaramanidina, nefa tsy navelany handeha fiara ny Malagasy eto an-toerana tokony hody any amin'ny faritra misy azy avy.
Ny ady atao amin'ny coronavirus eto MadagasikaraHanova
Fandraisana andraikitry ny fanjakanaHanova
Manao sakana ara-pahasalamana ny fanjakana amin'ireo olona mandeha fiara mivoaka an'Antananarivo sy Toamasina. Miitatra amin'ny faritra hafa koa izanytaty aoriana. Mandray an-tanana ny fanaraha-maso ireo ahiahina ho marary atoka-monina sy ireo tena marary ny fanjakana malagasy. Misy ny fanondrahana fanafody ny toerana sasany (tsena). Manao fampianarana sy fanentanana ny olona amin'ny fihetsika tokony na tsy tokony hatao ny ministera maromaro mba tsy hfindran'ny aretina sy hanaparitaka izany. Fandrarana ny fivezivezena amin'ny amin'ny alina manomboka amin'ny 8 ora hariva ka hatramin'ny 5 ora maraina. Manaraha-maso ny fitaovam-pitataterana sy mijerena ny isan'ny olona mitaingina aminy ny mpitandro filaminana amin'ny tanàn-dehibe msasany (ny isan'ny olona mandeha fiara na môtô iray dia tsy tokony hihoatra ny roa).
Fandraisana andraikitry ny tsirairayHanova
Araka ny fanentanan'ny fitondram-panjakana dia ilaina ny fahadiovan'ny vatana (fanasan-tanana amin'ny savony), ny fampiasa takom-bava, ny tsy fivoaboahana ivelan'ny toeram-ponenany avy, ny fiantsoana ny tompon'andraikitra amin'ny laharan-telefonina 910 na 913 raha misy olona ahiahina ho tratran'ny aretina.
Ny olana momba ny ady atao amin'ny coronavirusHanova
Mtaraina ny olona noho ny halafosan'ny takom-bava sy ny tsy fahafantarana ny fomba fampiasana izany. Olana koa ny tsy fahampian'ny fandrarahana fanafody amin'ny toerana tsy maintsy voakasiky ny olona eny amin'ny tanàna na eny amin'ny toeram-piasana, ny tsy maintsy ampiasana ny fitaovam-pifanakalozana (vola) sy ny fifanolorana ny entam-barotra amin'ny mpivarotra sy ny mpividy. Olana amin'ny ady amin'ny coronavirus koa ny tsy fanajan'ny olona ny elanelana iray metatra rehefa milahatra eny amin'ny toeram-pivarotana sasany (magazay, fivarotam-panafody, Tsena Mora) na mandeha eny an-tsena.
Ny tranga ara-tsosialy ateraky ny fepetra momba ny coronavirusHanova
Ireo olana mitrangaHanova
Fahasahiranan'ireo tsy manan-kialofanaHanova
Betsaka ny Malagasy amin'ny tanàn-dehibe, indrindra ny ao Antananarivo sy Toamasina, no mandositra mankany ambanivohitra na mody any amin'ny faritra niaviany izay mbola tsy ahenoana trangan'io aretina io.
Tsy fisian'ny fiara mpitatitra olonaHanova
Nanapa-kevitra somary tampoka ny fitondram-panjakana momba ny fampiatoana ny fifamoivoizana mampitohy an'Antananarivo amin'ny faritra hafa, na an'i Toamasina amin'ny faritra hafa, hany ka betsaka ny olona ianjadian'ny fahasahiranana ao amin'ireo tanàna roa ireo satria tsy afaka mody any amin'ny faritra niaviany, ary ireo any amin'ny faritra hafa izay tsy afaka mody any Antananarivo na any Toamasina; misy ny mitaraina lany vatsy, tsy mahita toerana honenana na hanatanterahana fidiovana. Eo koa ireo 4Mi mpatory an-tsena izay efa tsy manana trano fonenana rahateo.
Mila hahazo vahana ny fanararaotana ataon'ny mpivarotra izay mampakatra ny vidin'entana ilain'ny mponina andavanandro (indrindra ny vary) sy ireo zavatra hafa heverin'ny maro fa mety miaro amin'ilay valanaretina (voasary makirana, tongololay, sns). Niezaka nanara-maso ny tsena amin'ny tanàn-dehibe (indrindra ny ao Antananarivo) ny fitondram-panjakana mba hifehezana ny fihoa-pampan'ny vidin-javatra. Betsaka amin'ny toerana sasany ny olona milahatra eny amin'ny toeram-pivarotam-panafody mba hividy ireo fanafody izay heveriny fa afaka miaro amin'ny coronavirus.
Olana eny amin'ny orinasa tsy miankinaHanova
Betsaka very asa ny mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina. Amin'ny orinasa tsy miankina izay mbola manohy mamokatra dia indraindray tsy voahaja ny fepetra fihibohana isan-toerana ao amin'ny toeram-piasana tsy miankina sasany (tsy voahajana ny elanelana iray metatra noho ny tsy maintsy ahatongavan'ny mpiasa rehetra hiasa), tsy misyna tsy ampy ny sarom-bava.
Ireo vahaolana aroson'ny fitondram-panjakanaHanova
Mitsinjo manokana ireo sokajin'olona sasany marefo ara-pivelomana ny fitondram-panjakana ka nikasa ny hizara sakafo sy vola amin'izy ireo: ny mpamily fiara fitateram-bahoaka sy ny mpanampy azy, ny mpamily taksy, ny mpanasa lamba, ny beantitra, ny mpivarotra tsy afaka mivarotra, ny mpivaro-tena. Ny fitondram-panjakana koa dia nampanantena ny tsy hampandoavana ny faktioran'ny Jiro sy Rano Malagasy, ny handray an-tanana ny famahana ny olan'ireo olona nindram-bola tany amin'ny banky, ny famahana ny olan'ny fandoavan-ketra hiarovana ny orinasa tsy miakina. Ankoatr'izany dia nampananten ny filoham-pirenena ny amin'ny fitohizan'ny "vary mora". Amin'ny toerana sasany dia ilaharana ny "Tsena Mora" karakarin'ny fitondram-panjaka izay mbola misy mitsikera fa tokony hatao "Tsena Bôjo". Manara-maso ny vidin'entana ny tomponandraiki-panjakana mba hisakanana ny fanararaotana ataon'ny mpivarotra sasany. Nangonina amin'ny toerana iray ny 4Mi.
Ireo zavatra heverin'ny olon-tsotra fa mety hiarovana amin'ny coronavirusHanova
Maro ny olon-tsotra milaza ho mahita fanafody na fomba hiarovana na hitsaboana ny aretina vokatry ny coronavirus ka ny sasany amin’izany dia fanafody nentim-paharazana ary ny sasany fanafody avy amin’ny fitsaboana moderna. Tsy misy anefa tompon’andraikitry ny fahasalamana manamarina ampahibemaso izany rehetra izany.
Mievoka amin’ny ravin-kininina, indrindra amin’ny ravin-kininina fotsy, mievoka amin’ny ravin’ny ravitsara. Izany hoy izy ireo dia atao mba hamonoana ny otrikaretina noho ny hafanana sy ny herin’ireo zavamaniry ireo. Ao koa ny mampiasa sakaviro potehina dia afangaro amin’ny rano mafana (na ampangotrahina) hatao fisortro, ny voasary (indrindra ny voasary makirana) afangaro na tsy afangaro amin’ny rano mafana (na nampangotrahina) ka atao fisotro. Ao ny fampiasana mandravasarotra potehina ampangotrahina. Ao ireo manoro hevitra amin’ny fihinanana goavy. Ao koa ireo mamporisika amin’ny fisotroana dite tongolo gasy.
Misy koa ireo milaza fa ny paractamol sy ny chloroquine dia miar na itsaboana izany. A koa ny vitamine C. Miitatra amin’ireo fantatra na lazaina fa miaro na manasitrana ny gripa na mampihena hafanana na antibiotika izany.
Misy ireo olona manoro anaran-tsavony manokana hisasana, ohatra ny savony Nosy. Ao koa ireo manoro hevitra amin'ny fanontsanam-bava sy ny fanaovana gararàka ary ny fanadiovana manadio aty orona amin’ny rano misy sira. Misy ny manoro hevitra amin'ny fampiasana ny tantely sy ny sakamalaho nototoina. Miitatra amin'ireo zavatra fantatra na heverina fa mahafaka aretin-tenda izany.
Fanampiana avy any ivelanyHanova
Fanampiana avy amin'ny OMSHanova
Fanampiana avy amin'ny firenena hafaHanova
Nanome vary milanja 600 taonina avy amin'ny fitondram-panjakana indiana. Nanome fitaovam-pitiliana haingam-piasa kokoa ny Sinoa.tamin'ny alalan'ilay lehilahy mpanan-karena sinoa.
↑ "Vaovao farany – Tafiditra eto Madagasikara ny coronavirus", in Vaovao farany, 21 Marsa 2020.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ny_valanaretin%27ny_coronavirus_eto_Madagasikara&oldid=980969"
Dernière modification le 27 Martsa 2020, à 16:13